Cristiano Ronaldo Oo Dhaliyay Goolkiisii ​​800aad Ee Xirfadiisa Ciyaareed Kulankii Manchester United
HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo oo dhaliyay goolkiisii ​​800aad ee xirfadiisa ciyaareed Kulankii Manchester United
November 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka Ingiriiska 0
Manchester United weeraryahankeeda Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii 800aad ee xifadiisa kubadeed.
Ka hor inta uusan Jadon Sancho soo afjarin goolkii uu ka dhaliyay Jaallaha Submarine, Ronaldo ayaa ka faa’ideystay qalad daafac oo ay sameeyeen Villarreal , isagoo kubad qurux badan ka dulqaaday goolhayaha.
36-sano jirkaan ayaa sii waday rikoorkiisa cajiibka ah ee gooldhalinta kulan kasta oo Champions League ah ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay goolkiisii ​​lixaad ee tartanka isagoo u taagan taariikh cusub oo shaqsi ah.
Goolkii furitaanka ee Ronaldo uu ka dhaliyay kooxda Unai Emery ayaa u dhiganta goolkiisii ​​800-aad ee waayihiisa ciyaareed ee quruxda badan, sidoo kale waxa uu ahaa goolkiisii ​​140-aad ee Champions League.
In ka badan 19 sano ayaa laga joogaa tan iyo markii uu Ronaldo dhaliyay goolkiisii ​​​​ugu horeeyay ee Sporting Lisbon midabada, 128 ka mid ah 800 oo uu dhaliyayna waxa ay yimaadeen labadiisii ​​xilli ciyaareed ee uu joogay Man United.
Xiddiga shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa haatan leh 10 gool 14 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan iyada oo United ay xaqiijisay booskeeda wareega 16ka markii ay 2-0 ku garaacday talaadadii.